Words on Bathroom Walls (2020) | MM Movie Store
စိတျဆိုတာ သိပျထူးဆနျးတဲ့အရာပါ။ စိတျရောဂါတှကေ ကုလို့ မပြောကျတဲ့ ရောဂါတှပေါပဲ။ဒါကို ရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျဖို့ စိတျနဲ့ပဲ ကြျောဖွတျနိုငျမှ ရမှာပါ။
စိတျရောဂါကို ကြျောလှားနိုငျဖို့ ဆိုတာလူကွီးရငျ့မာကွီးတှတေောငျ ကြျောလှားဖို့ ခကျခဲတဲ့အခြိနျမှာ ဆယျကြျောသကျတဈယောကျက ဘယျလိုမြားရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျမှာတဲ့လဲ?စိတျရောဂါတဈခုကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ဆိုတာ စိတျခှနျအား အရမျးကောငျးတဲ့လူတှမှေ တတျနိုငျတာမြိုးပါပဲ။
အခဈြကွောငျ့ အရာရာ အကောငျးအတိုငျး ဖွဈစမေယျ ဆိုတဲ့ စကားတော့ ရှိပါတယျ။ စိတျရောဂါကို အခဈြကွောငျ့ မတ်ေတာတရားကွောငျ့ အောငျနိုငျတယျ ဆိုတာမြိုးက ဖွဈနိုငျပါ့မလား? မတ်ေတာတရား ဆိုတာ စိတျခံစားခကျြတဈမြိုးပဲ မဟုတျလား? ဘာသာတရားနဲ့ရော စိတျကို ကုနိုငျပါ့မလား? စိတျကို စိတျနဲ့ပဲ ကုရငျတော့ ရကောငျးပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးထဲမှာတော့ ဆယျကြျောသကျ စိတျရောဂါသညျ အာဒမျ ပကျထရာဇယျလီ ရဲ့ စိတျရောဂါကို ရငျဆိုငျရပုံတှကေိုမွငျတှရေ့မှာပါ။ တဈခုလပျ အမနေဲ့ နရေတဲ့ အာဒမျ ရဲ့ စိတျရောဂါဟာ ဓာတုဗဒေ ဓာတျခှဲခနျးထဲမှာ စပွီး ပျေါပေါကျလာပါတယျ။
သူ့နားမှာ အသံတှေ ကွားရပါတယျ။ အနားမှာ မရှိတဲ့ လူတှကေို သူ မွငျနရေပါတယျ။ သူ့ကိုယျသူ စိတျကစဉျ့ကလြားရောဂါသညျမှနျး သိလာပမေယျ့ ဒီလူတှနေဲ့ ဒီအသံတှကေို သူ မထိနျးခြုပျနိုငျပါဘူး။ ဆေးသောကျပွနျတော့လညျး ဆေးရဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကွောငျ့ စားဖိုမှူး ဖွဈခငျြတဲ့ အာဒမျ အရသာ မခံနိုငျတော့ပါဘူး။
လကျကလညျး တုနျလာပွနျပါတယျ။ ဆေးဖွတျလိုကျပွနျတော့လညျး အသံတှကွေား မရှိတဲ့လူတှကေို မွငျနရေပွနျပါတယျ။ အဓိကဇာတျဆောငျက သရုပျဆောငျ ကောငျးလှနျးတော့ ကိုယျပါ မှနျးကွပျလာတာမြိုးပါ။ စိတျရောဂါကို စိတျဝငျစားတယျဆိုရငျ ကွညျ့ကွညျ့ပါ။
ဒါရိုကျတာရဲ့ တငျပွခကျြကောငျးလှနျးတော့ အာဒမျနရောမှာ ကိုယျရောကျသှားပွီး ကိုယျပါ ရုနျးထှကျလို့ မရတော့တဲ့ အနအေထားမြိုးထိ ဖွဈပါတယျ။အာဒမျ တဈယောကျ စိတျရောဂါကို ဘယျလို ရငျဆိုငျကြျောလှားမယျဆိုတာတော့ ဒီကားလေးမှာကွညျ့မွငျနိုငျပါတယျ။
စိတ်ဆိုတာ သိပ်ထူးဆန်းတဲ့အရာပါ။ စိတ်ရောဂါတွေက ကုလို့ မပျောက်တဲ့ ရောဂါတွေပါပဲ။ဒါကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ စိတ်နဲ့ပဲ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှ ရမှာပါ။
စိတ်ရောဂါကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဆိုတာလူကြီးရင့်မာကြီးတွေတောင် ကျော်လွှားဖို့ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်က ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်မှာတဲ့လဲ?စိတ်ရောဂါတစ်ခုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ စိတ်ခွန်အား အရမ်းကောင်းတဲ့လူတွေမှ တတ်နိုင်တာမျိုးပါပဲ။
အချစ်ကြောင့် အရာရာ အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ် ဆိုတဲ့ စကားတော့ ရှိပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကို အချစ်ကြောင့် မေတ္တာတရားကြောင့် အောင်နိုင်တယ် ဆိုတာမျိုးက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? မေတ္တာတရား ဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်တစ်မျိုးပဲ မဟုတ်လား? ဘာသာတရားနဲ့ရော စိတ်ကို ကုနိုင်ပါ့မလား? စိတ်ကို စိတ်နဲ့ပဲ ကုရင်တော့ ရကောင်းပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက် စိတ်ရောဂါသည် အာဒမ် ပက်ထရာဇယ်လီ ရဲ့ စိတ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ရပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ခုလပ် အမေနဲ့ နေရတဲ့ အာဒမ် ရဲ့ စိတ်ရောဂါဟာ ဓာတုဗေဒ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ စပြီး ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
သူ့နားမှာ အသံတွေ ကြားရပါတယ်။ အနားမှာ မရှိတဲ့ လူတွေကို သူ မြင်နေရပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ကစဥ့်ကလျားရောဂါသည်မှန်း သိလာပေမယ့် ဒီလူတွေနဲ့ ဒီအသံတွေကို သူ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဆေးသောက်ပြန်တော့လည်း ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် စားဖိုမှူး ဖြစ်ချင်တဲ့ အာဒမ် အရသာ မခံနိုင်တော့ပါဘူး။
လက်ကလည်း တုန်လာပြန်ပါတယ်။ ဆေးဖြတ်လိုက်ပြန်တော့လည်း အသံတွေကြား မရှိတဲ့လူတွေကို မြင်နေရပြန်ပါတယ်။ အဓိကဇာတ်ဆောင်က သရုပ်ဆောင် ကောင်းလွန်းတော့ ကိုယ်ပါ မွန်းကြပ်လာတာမျိုးပါ။ စိတ်ရောဂါကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကြည့်ကြည့်ပါ။
ဒါရိုက်တာရဲ့ တင်ပြချက်ကောင်းလွန်းတော့ အာဒမ်နေရာမှာ ကိုယ်ရောက်သွားပြီး ကိုယ်ပါ ရုန်းထွက်လို့ မရတော့တဲ့ အနေအထားမျိုးထိ ဖြစ်ပါတယ်။အာဒမ် တစ်ယောက် စိတ်ရောဂါကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမယ်ဆိုတာတော့ ဒီကားလေးမှာကြည့်မြင်နိုင်ပါတယ်။